Borja Prado anosiya Endesa uye anovhura kusahadzika kutsva mukambani | Ehupfumi Zvemari
Borja Prado anosiya Endesa uye anovhura kusahadzika kutsva mukambani
Imwe yenhau dzakwezva kutarisisa mumazuva achangopfuura ndeyekusiya basa kwemutungamiri weEndesa wepamusoro mushure memakore anopfuura gumi ari muhofisi. Chokwadi, mutungamiri weEndesa, Borja Prado, achasiya chinzvimbo chake ari mukuru wekambani yemagetsi pamusangano mukuru unotevera wevagovani izvo ichaitwa musi waApril 12. Ruzivo urwu, rwunotungamirwa nenzvimbo dziri padyo nemaneja vanoziva mamiriro ezvinhu, rwakatosimbiswa nekambani yemagetsi pachayo kuNational Securities Market Commission (CNMV).
Iye zvino zvinoramba zvichionekwa kuti ndiani achatora matomu ekambani yemagetsi yeSpanish. Mupfungwa iyi, iyo kambani yeItaly iyo ine chikamu chakakura chekugovana inoshuvira kuisa mutungamiriri asiri mutungamiriri anotungamira kambani yemagetsi yeSpain. Runyerekupe runoratidza kuti munhu uyu anogona kuve aimbove mukuru wevatengesi veSpanish, Juan Rosell. Chero zvazvingaitika, iyo nhau inoratidza kuti Italy inoda munhu padhuze kune ayo bhizinesi zvido. Chimwe chinhu umo Borja Prado yakave nekukakavadzana naEnel mumakore achangopfuura.
Iko hakuna kupindurwa kunhau idzi mukunyorwa kwezvikamu zveEndesa pamisika yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoramba zviri pamatanho akafanana, padyo kusvika makumi mana euros nezvikamu. Ndokunge, zviito izvi hazvina kudzinga mutengo, kana pasi kana kumusoro, asi nenzira yakagadzikana uye sezvave zvichiitwa mumazuva achangopfuura. Seimwe yemakambani akanyorwa ayo akaonga zvakanyanya mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira, iine purofiti yekutenderedza 13%. Zvichienderana nehunhu hwemamwe makambani ari muchikamu chimwe chete.
1 Endesa: Prado inotaura zvakanaka
2 Nechivhenekero pa23 euros
3 Mbiri yaBorja Prado
4 Kubiridzira kwemagetsi muna 2018
5 Zvisina kujairika maitiro mukubatana
6 Technologies kurwisa kubiridzira
Endesa: Prado inotaura zvakanaka
Chero zvazvingaitika, kuonekana nemutungamiri weEndesa, Borja Prado, kwanga kusiri kushamisika zvachose. Kana zvisiri, nekusiyana, yaive runyerekupe rwakanyanya rwakamhanya mumusika wemasheya weguta guru reSpain. Ichi chingave chimwe chechikonzero chikuru nei mitengo paEndesa hauna kuita mutsauko wakasiyana mumisika yemari. Kune vamwezve vanoongorora zvemari vanoti vari kunetsekana kuti hurumende ichave ani mushure mesarudzo dzinotevera musi waApril 28.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti iyi ndeimwe yeiyo zvikamu zvakagadziriswa zvakanyanya yemari munyika medu. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Nepo zvichipesana, sekureva kwepepanhau El País, zita raJoan Rosell riri kutariswa pakati pevachakwikwidza kumutungamiriri asiri mutungamiriri. Nekudaro, José Bogas anotora chinzvimbo cheMukuru uye Enel anoramba achivimba naye. Naizvozvo, zvaisazove zvisina musoro kuti ave mutsivi pakupera kweBorja Prado munzira yekambani yemagetsi.
Nechivhenekero pa23 euros
Chero zvazvingaitika, uye kana paine zvisina kushamisika mumazuva anotevera, chinangwa cheEndesa's shares ndechekusvika pamatanho makumi maviri nemaviri euros mugove uye kunyange mamwe madanho ekuzvikudza. Muchikamu chekupedzisira ichi zvinoenderana nekuti misika yequity yepasi rose ichashanduka sei mumazuva anotevera. Kunze kwekugadzirisa kunogona kuitika mumavhiki ano uye izvo zvinogona kududzirwa se purofiti kuunganidzwa kusati kwasimuka kwemwedzi yekupedzisira. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemhando yepamusoro yekusimudzira panguva ino, kunyangwe kusahadzika kwemazuva ekupedzisira.
Nekudaro, kuenda kwehutungamiriri weEndesa naBorja Prado kunogona kukonzera kusahadzika kwakawanda pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Zvirinani mune ipfupi izwi uye izvo zvinoenderana nenhau nezve mutsivi wake anogona uye chii nechinangwa chayo pane bhizinesi mutsetse wekambani yekutanga simba reSpanish. Mupfungwa iyi, hakuzovi nesarudzo asi kunyatsoteerera zvinogona kuitika kumutengo wezvikamu zvaro kubva panguva dzino chaidzo. Iko zvachose hapana chinogona kubviswa kunze sezvo chero chinhu chichiitika. Uye uko kungwara kuchave kwakakurumbira mune zviito zvevashambadzi vadiki nepakati.
Mbiri yaBorja Prado
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti Borja Prado aive nehukama hwakaoma neazvino CEO weEnel, Francesco Starace, uyo aive akaisa kuvimba kwake muBogas, iyo CEO yeSpain. Chokwadi ichi chinogona zvirokwazvo kuranga zvakaitwa naEndesa mumisika yenyika yequity. Nekuti misiyano yakakomba pakati pevatariri veItari neSpanish haigone kucherechedzwa. Zvino isu tichafanirwa kutarisa kuti kukodzera kwemusoro mutsva wekambani yemagetsi yeSpanish chii. Mupfungwa iyi, vatengesi vanozoziva kwazvo ramangwana rayo rekushanduka.
Chimwe chinhu chinofanira kutarisirwa kubva zvino hukama hwakanakisa hwaive naBorja Prado nezvose zvematongerwo enyika uye masimba eruzhinji yenyika yedu. Ose maviri chiratidzo uye chevamwe uye ichi chinhu chinogona kurasika kubva zvino zvichienda mberi. Muchiitiko ichocho, shanduko yekambani iyi pamusika wemusika wenyika inogona kurangwa. Kunyanya kana zvasvika kune chikamu chakarongedzwa semagetsi parizvino. Uye izvo zvinoda rutsigiro rwezvematongerwo enyika kusimudzira ayo mabhizinesi mitsara, kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Mupfungwa iyi, nguva isingafungidzirwe inotanga nemisika yezvemari uye iyo ichiri kusazivikanwa kuti inogona kupera sei. Kuda uchaita sei gadzira mutemo wedigidhi yekambani kubvira kusvika parizvino yakagovera zvese zvayakanakira kugovera uyu muripo pakati pevaigovana navo. Zvichava zvakafanira kutarisa kuti zviri sei kubva kumakore mashoma anotevera uye nemutungamiri mutsva kumusoro kweEndesa. Chinhu icho vatengesi vese vachatarisa negirazi rinokudza uye icho chingapa avo vagovana vekambani zvimwe vasingafarire.
Kubiridzira kwemagetsi muna 2018
Endesa yakaona ingangoita 65.000 magetsi emagetsi mu2018 uye yakadzoreredza mamirioni 601 kubiridzira kWh, chiyero chakaenzana nekushandisa kwemagetsi kwePalma de Mallorca kwemwedzi mitanhatu. Iyo Kushandiswa kwetekinoroji nyowani uye kubatana nemaSecurity Forces uye vagari vari kuita kuti zvikwanise kusimbisa kurwisa iri dambudziko rakakomba. Mugore rekupedzisira chete, zvichemo zvevagari zvakabatsira kufumura angangoita zviuru zvina zvekubiridzira.
Pakati pegore rapfuura, kuongororwa kweane kubva pagumi kunoitwa nekambani kwakaguma ne kubiridzira kuona. Mune makumi masere muzana ezviitiko, dzaive hookups zvisiri pamutemo kunetiweki nevashandisi vasina kondirakiti uye nezvimwe, kune mamwe marudzi ehunyengeri, akadai sekubatanidza zvakapetwa kana kumisikidza kwemidziyo yekuyera. Kunze kweaya manhamba, zvakakosha kuti uzive kuti magetsi ekubiridzira iri, pamusoro pezvose, dambudziko rakakomba rekuchengetedza uye hutano hwevanhu, zvese kune iye wekubiridzira iye uye neavo vakamukomberedza. Mumakore achangopfuura, pakave nezviitiko zvakawanda zvemoto uye zvinobuda zvinokonzerwa nekushomeka kwenzvimbo.
Zvisina kujairika maitiro mukubatana
Chimwe chinhu chinowedzera dambudziko rekubiridzira kukura kwezvirimwa zvecannabis izvo zvakaitika mumakore apfuura. Izvi zvirimwa zvinowanzo kuperekedzwa ne hookups zvisiri pamutemo kune gridhi yemagetsi, izvo zvinogona kutungamira mukukanganisa kukuru kwekupa kune nzvimbo dzevanhu dzavanoitirwa. Imba inoshandiswa se "indoor" yekudyara mbanje inoshandisa yakaenzana dzimba makumi maviri uye kuwanda kwezvirimwa izvi mune dzimwe nzvimbo kunozadza network.
Kubiridzira kwemagetsi kunokanganisa nzanga yese, nekuti inoshandura ichiwedzera bhiri remagetsi yevatengi vese uye inogona kuisa panjodzi zvese kuchengetedzeka uye mhando yekupihwa kwevamwe vatengi. Zvakare, zvinopesana nezvingafungidzirwe, huwandu hwekubiridzira kwemagetsi kuSpain kunoitwa nevatengi vakuru, ese makambani mumaindasitiri nemasevhisi masevhisi pamwe nemabhizinesi uye / kana dzimba dzevanhu vane huwandu hwekushandisa.
Technologies kurwisa kubiridzira
Endesa iri kubheja zvakasimba kudigitalization mukati meyayo bhizinesi zano. Iko mashandisirwo epamberi algorithms emuchina kudzidza (Machine Kudzidza) uye kudzika kudzidza (Kudzidza Kwakadzika) pane iyo Big Data Iri kubvumira akawanda emakambani mashandiro kutariswa zvakanyanya. Nechikonzero ichi, iri kuwedzera simba rayo mukushandisa kwemaalgorithms ekuona kubiridzira, kugadzirisa kunatsurudza matare nekuzviita zvakanyanya.
Pamusoro pekushandiswa kweBig Data, matekinoroji matsva akagadzirwa mumakore apfuura kurwisa kubiridzira akawedzerwa. Pakati pevamwe, mavideo kopi netracer zvinomira pachena, izvo zvinobvumidza kuongorora kuiswa kwepasi pevhu, kwakaputirwa mumadziro kana kusingawanikwe neziso rakashama, kuona, pakati pezvimwe zvinokanganisa, kuvapo kwekubatana kwakapetwa kaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Borja Prado anosiya Endesa uye anovhura kusahadzika kutsva mukambani
Misoro nemiswe pakati pevavaki veSpanish stock stock
Yakagadziriswa mari yekutarisisa yegore rino